Maitiro ekuisa Linux kubva kune USB pendrive | Kubva kuLinux
Maitiro ekuisa Linux kubva padanda re USB
Uyu kuraira unoshandiswa kuisa chero distro kuburikidza ne USB. Uye zvakare, inonyanya kubatsira kune avo vane avo emabhuku uye nekudaro havagone kushandisa iyo LiveCD kuisa Linux.
Chaizvoizvo, izvo zvatinozoita kushandisa diki chirongwa chinonzi UNetBootin, Ine shanduro dzeLinux neWindows.
Dhawunirodha iyo ISO mufananidzo weiyo distro iri mubvunzo.
Dhawunirodha UNetBootin. PaUbuntu, zviri nyore kana iwe ukachiisa uchishandisa Synaptic.
Mhanya UNetBootin kubva kuApplications> System Zvishandiso.
Isa iyo pendrive
Sarudza iyo ISO mufananidzo wakadzvanywa mudanho rekutanga sosi.
Sarudza USB drive sekuenda
Gamuchira uye umirire kuti ipedze (zvinogona kutora maminetsi mashoma)
Tangazve komputa, gadzira iyo BIOS kuti itange kubva kuUSB.
Nenzira iyi, haungochengetedze maCD / maDVD chete kuti ungadai wakamanikidzwa kupisa zvisati zvaitika, asi unogona kuyedza masystem ese anoshanda pasina kudzima iota yedata rakachengetwa pakombuta yako. Pasina kutaura izvozvo inoshanda nekukurumidza kuti kana isu takaboora iyo system kubva kuLiveCD / DVD.
Kuti uwanezve yako USBInokurudzirwa kuimisa, asi hachisi chinhu chinodikanwa, nekubvisa mafaera ese akateedzerwa neUNetBootin zvakakwana. 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekuisa Linux kubva padanda re USB
Andres Westra Ureña akadaro
Dambudziko diki, ndakaita zvese zviri pamusoro kuyedza kuisa Kubuntu 12.10 pane usb. Uye akandiudza kuti zvakashanda. Asi kana ini ndikavhura pc ndinowana boot boot. Al .iso ini ndatoona iyo md5 sum. Uye iyo BIOS yakatogadzirirwa kubhoot usb. Asi pese pandinoedza, ndinowana Boot chikanganiso.
Ndakaedza kubhowa ubuntu neusb uye kana ichishanda.
Pindura Andres Westra Ureña
Inzwa chero vhidhiyo yaunogona kusiya?
Ndine fedora pane diski uye handizive kana nazvo ndinogona kurishandisa kuiisa pane usb
Edgar Amarilla akadaro
iyo inondikanda ini kukanganisa kana ndichiisa .. inoti "zvisingaite kana yakaora kernel mufananidzo" uye ndihwo ubuntu hwandinoda kuisa ... chero rubatsiro? zvandinofanira kuita?
Pindura Edgar Amarilla
Zvinoitika zvakafanana. parizvino ndiri kugadzira bootable usb nechimwe chirongwa (lili) kuti ndione kana ichivandudza chimwe chinhu. Mumwe munhu aigona kundiudza kuti nei izvi zvichiitika kana kuti ungazvigadzirisa sei, kana Lili asingadaro?
Zvinoitika zvakafanana kwandiri.
Juan Pablo Meya akadaro
ahhhh zvakanaka! Ipa vakawanda kutenda !!! Mufaro!
Pindura Juan Pablo Mayoral
Nzira iri nyore yekushandisa unetbootin kurodha pasi iyo ISO faira yeiyo distro yaunoda kushandisa "neruoko". Mune mamwe mazwi, enda kune iyo Linux Mint peji, dhawunirodha iyo ISO yaunoda zvakanyanya uye, kana yapedza kurodha pasi, shandisa Unetbootin kugadzira iyo Live USB neiyo ISO faira yawakadhirodha pakutanga.
Mhoroi, ini ndoda kuisa linux mint 13 kubva pendrive asi kugovera hakuoneke mune unebootin ...
unetbootin yakundikana kwenguva yakareba: S
Lubuntu iguru distro!
Une chokwadi chekuve chikuru.
Ndatenda! Yakagadziriswa!. 🙂
Ndiri kuzoyedza naDebian, zvinotaridzika zvakanaka. Nenzira, nhanho yechishanu haina kunaka, mufananidzo unoteedzerwa mune nhanho 5, kwete muna 1. Kupfuura chero chinhu nekuti kuchine mumwe newbie anopenga neaya minutiae.
Hei, ko kana ini ndichida kudzima mafaera ese uye kuwana linux?
Usakanganwa kuti iyo pendrive iwe yaunofanirwa kuumbiridza seFAT32 kana iwe ukaisiya seNTFS haishande kwauri
Chokwadi ndechekuti ini handizive kuti sei iwe uchiwana iko kukanganisa.
Nezve imwe pfungwa, ini ndinofungidzira kuti iwo meseji waunowana paunobuda muLubuntu wakajairika, nekuti inofunga kuti urikushandisa CD senge LiveCD uye kwete pendrive. Chaunofanirwa kuita kubvisa pendrive uye pinda pinda.
mhoro, ini ndoda rumwe rubatsiro, ndakaedza unetbootin kubvira ubuntu 12.04 kuti ndione zvakaita lubuntu. Ndakaifarira uye ndakaedza kupedzisa kuisirwa, asi ndine zvikamu zvakawanda padhisiki rangu, saka handina kukwanisa, uye ikozvino hazvindibvumidze kutanga ubuntu zvinondiudza kuti ndinofanira kutanga kernel kare, ndinogona kungopinda muyedzo ye lubuntu, iyo iyo haina Ini ndinogona kuita chero chinhu.
Ndinovimba munogona kundibatsira
Hapana chandakanzwisisa Juan! Kutanga iyo kernel? Ndeipi mhosho inokanda iwe? Mumamiriro api ezvinhu? Gadzira dambudziko zvishoma zvirinani kuti uone kana tichigona kukupa ruoko.
Mhoroi, maita basa kwazvo nekukurumidza mhinduro.
Icho chokwadi ndechekuti ini ndakaedza unetbootin ne lunubu, uye pandakadzoreredza sisitimu kuti ndipinde mu ubuntu, haina kunditendera kuti ndipinde mairi, yakati: "Unofanirwa kurongedza kernel kutanga" kukanganisa.
Chimwe chinhu chingangove chakakosha ndechekuti pandinobuda lubuntu rinondiudza "ndokumbira ubvise midhiya yekuvhara uye uvhare tireyi (kana paine) wobva wadzvanya pinda", uye handizive zvekuita.
Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwako uye neako blog.
Ini handina kuzviitira iyo USB kana CD asi ndakananga kubva kune rakaomarara dhisiki, zvinongonditendera kuti ndipinde mudemo rerubuntu nemahwindo. Chaizvoizvo hure, nekuti ini ndaisatenderwa kuita chero chinhu.
Zvandakaita pakupedzisira kuita fomati kubva kumahwindo kupatsanura kwandaive neubuntu (ndakarasa zvese zvirongwa, mapeji akachengetedzwa nevamwe) uye ndakaisa lubuntu kubva pakutanga.
Vhiki rakavhuvhuta asi ndinovimba lubuntu rinondiitira zvakanaka.
Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro uye kutarisirwa
Mhoro! Ndatenda nekupedza nguva pane idzi misoro.
Nezve izvo zvandisati ndawana rubatsiro, kana mune iyo UNetbootin peji, iri nezve mamiriro ezvinhu iyo usb inogona kunge iri, regai nditsanangure, chii chinoitika kana hafu yacho yatove nedata asi imwe ichida kushandisa imwe hafu kuisa iyo yaunoda distro? Kana izvo zvichikwanisika, munhu angaite sei nezve kuwana iyo data? kana kuputika kweiyo yakaisirwa distro kunokonzereswa pese painobatana?
Kana kugoverwa kwelinux paiswa paUSB zvinogadzirawo bhutsu, kuchinjanisa uye zvikamu zvepamba? Unogona here kushandisa usb hombe, iti 8 Gb kana 16 Gb, kune maviri distros uchishandisa chirongwa chimwe chete?
Chekupedzisira, uye nekungoda kuziva nekuti Manjaro yatove nemutungamiri wayo, nei UNetbootin isingashande Manjaro? Least Zvirinani ndinomirira mhinduro kumubvunzo wekutanga, maita basa.
Elhuerto Delfer akadaro
manjaro haigone kushandisa nzira iyi, dd inoshandiswa kana kupiswa pamwe nemunyori wemifananidzo
Pindura kuna Elhuerto Delfer
tonny crl akadaro
Kana ini ndine mamwe mafaera akachengetwa paUSB, ndinofanira kuadzima here kana kuti ndinogona kusevha iyo chifananidzo ndisina kumisikidza iyo USB?
Pindura tonny crl
Kwete. Iwe unofanirwa kuita zvinotaurwa nechinyorwa. Hapana chimwe.
hesi mushure mekugadzira iyo usb bootable, kuti ibhure mafaera ndinofanira kuvhura iyo linux mufananidzo?
Kwete hazvigone kuitwa…
Dai zvaive nyore, haungade Unetbootin.
Zvinoitwa nechirongwa ichi kugadzira mafaera ekumisikidza akati wandei kuti iwe utange sisitimu pasina matambudziko
Kana iwe uchifarira, ndinokurudzira kuti ushanyire mapeji anotevera: http://unetbootin.sourceforge.net/ http://es.wikipedia.org/wiki/UNetbootin
uye zvinogona kuitwa nekusunungura chifananidzo pane yakananga usb (yakambomisikidzwa) ... pasina kushandisa UNetBootin? ... (zviri pachena kugadzirisa bhuti kubva kuUSB) ...
Chii chinonzi UnetBootin chaicho pane iyo pendrive? Kunze kwekuteedzera mafaera kubva kune isina kuvharwa iso mufananidzo ...
Mhoro. Ini handikwanise kuisa Unetbootin kana kubva kuSynaptis kana kubva pawebhu. Ini ndinowana yekukanganisa meseji maererano nefaira chimwe chinhu chakadai> 4.3.3
Ini ndinowana dambudziko iri nguva dzese kana kubhowa kubva kuUSB:
SYS LINUX 4.07 EDD 2013-07-25 Copyright (C) 1994-2013 H. Peter Anvin et al.
Ndakaedza mazana matatu ezvirongwa kukwirisa .iso kugovera pane USB uye ini ndinowana iko kukanganisa mune ese iwo Ndine Acer Aspire One uye handigone kuisa linux asi iri neUSB.
Ndatsvaga ruzivo pane ino webhusaiti:
Uye hazvigadzirise dambudziko kwandiri kana.
Tarisa, chinhu chakachengeteka kushandisa dd raira kubva kune iyo terminal kuendesa iyo ISO kune pendrive, zviri nyore kutevedzera http://aprenderconlibertad.blogspot.com/2014/06/crear-facilmente-un-pendrive-booteable.html
Ndatenda kwazvo nerubatsiro .. ndakakwanisa kuiisa pasina matambudziko ..
mukomana akanaka ndakazomuwana ndatenda
Uyu ndiwo wekutanga giredhi / kindergarten mubvunzo kubva kune neophyte?
1) Ini handizive chinonzi "ISO" chii / zvinoreva
2) Girazi / chifananidzo chedenga chinofanira kudzikiswa?
3) Chii chinonzi "unetbootin"? ….
Pindura kuna Charcuteria
SYSLINUX 4.07 EDD 2013-07-25 Copyright (C) 1994-2013 H. Peter Anvin et al.
Kanganiso: Hapana faira yekumisikidza yawanikwa
Kwete DEFAULT kana UI yekuraira rairo yakawanikwa!
Ndakaedza mazano akasiyana siyana, uye haishande kune Olidata L51II0 ine 80 GB disk uye 1Gb RAM.
Ini zvakare ndakamomesa dhisiki senge rekunze kubva kune ino ubuntu kuti iite matatu linux mapati aripo, asi naaa… ichi chinhu chakandiodza ini…. Pane chero munhu anoziva kuigadzirisa kuti apedze kuisirwa USB kwe ubuntu 12.04?
edza kuzviita kubva pane diski kwandiri iyo yakakanda iko kukanganisa kumwe chete asi pandakaitanga kubva ku diski KANA ICHISHANDA
Pindura kuna HARASHIMA
Zvakanaka. Ini ndiri mutsva pane izvi. Ini handina kumbobvira ndaisa windows semuenzaniso uye zvishoma ubuntu 14.04. Zvandinoda kuita kuyedza ubuntu 14.04 kubva kune iyo pendrive. Dambudziko nderekuti ndisati ndaedza, ini ndaisanzwisisa mirairo. Ini ndakaburitsa UNetBootin yewindosws uye ndikachengeta iyo peni pamwe neiyo iso mufananidzo we ubuntu 14.04. Mubvunzo ndowe unotevera, ndinofanira here kuita chimwe chinhu ndisati ndatanga kuyedza ubuntu kubva pendrive, kana nezvirongwa zvakatakurwa zvisina kuiswa, ndinogona kutanga zvakakwana?
shamwari kutanga unetbooting unofanirwa kuiisa pakombuta yako uye kwete kuipfuudza kune yako usb sezvo isingabatsiri ... isa unetbooting pakombuta yako mushure mezasi sarudza iso mufananidzo wozotarisa iyo iso mufananidzo wakambotorwa pasi uye wakachengetwa mune yako pc wobva wadzvanya pane gadzira uye voila chirongwa chisina kuburitsa chichaita zvese kana chikakumbira iwe kuti utangezve iwe unochipa icho kuti chigamuchire uye gadziridza komputa yako kubhoot neusb uye ndizvozvo chete.
carlos contreras akadaro
Husiku hwakanaka, ndiregerere, ini ndiri mutsva kune izvi.
Ndine PC ine Windows 7 uye ndave kutobhadhara kuti ifomatwe nekuda kwemavhairasi.
Sezvineiwo rimwe hutachiona hwakamupinda nekuti haindibvumidze kubatanidza kune wifi network yeimba.
Unogona kundipa zano rekugadzira bootable usb uye nekuisa Linux
Pindura carlos contreras
Ndinokurudzira kuti uverenge "gwaro rekutanga" redu.
Ndine dambudziko kana ndichimhanya kali linux kubva kuUSb kana ndichirodha pasi ini ndinowana syslinux 3.86 2010-04-01 EBIOS Copyright (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al.
uye kubva ipapo hapana chinoitika kunyangwe ndikabvisa kana kuisa usb haina kutakura ndinofanira kumirira bhatiri kuti ripere kuitira kuti rishande nemahwindo iwe unganditumire email ku e103746156po@hotmail.com gracias
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, wakakwanisa kugadzirisa dambudziko racho here?
Alexander Z. akadaro
Unogona kuzvigadzirisa, zvinoitawo kwandiri here?
Pindura kuna Alejandro Z.
Dambudziko nderekuti yaishandisa uneboting uye mune kali linux zvinyorwa inotaura kuti chinofanira kunge chiri chimwe chirongwa chandisingarangarire icho chinonzi asi unogona kutarisa zviri pamutemo kali linux peji
Carlos Torres akadaro
Ndakawana ruzivo urwu rwakakosha, maita basa.
Pindura Carlos Torres
NDINOGOITA SEI KANA ISO KERNEL ICHANDITAURA ZVANDINOFANIRA?
Ndine dambudziko, mumwe munhu angandibatsira, ini ndine linux 4.0 inoshanda sisitimu uye ini ndoda kuichengetera kune usb memory.
Pindura kune eduin
Diana Rojas akadaro
Ini handikwanise kuisa linux. Ini ndatoedza zvese ne ubuntu uye ne linux mint mu 64-bit uye 32-bit vhezheni.Mu simaki handina kumboona sikirini ine sarudzo yekuisa pamwe neimwe sisitimu yekushandisa, chete bhokisi rekuparadzanisa rinoonekwa uye ipapo rinokiya. ndine sony netbook ine i5 uye windows 7.
Pindura kuna Diana rojas
Ndinokutendai nekuva newebsite ino
Unogamuchirwa, José Luis!
Mhoroi, iwe unoziva kuti ndine HP Mini 210 iri kudya musoro wangu haha ​​ini ndaedza neiyo linux chirongwa, neiyo unet, iyo ultra iso pakati pevamwe uye ini handikwanise kupinda mubhuti sezvo ndiani anoti, post restart iyo skrini yakasviba ne dhijhi kubwaira uye hapana chimwe chinoitika, ndokumbirawo ubatsire !!!!
Mhoro Alejandro! Ini ndinokurudzira kuti ufambise mubvunzo wako kublog.fromlinux.net.
Usakanganwa kutsanangura zvese zvakadzama zvinoenderana kuti zvikubatsire.
Jose David Bracho akadaro
Shamwari dzakanaka ndine chikanganiso mukanaima nyowani, ndinokuudza kuti pendrive yangu yakabhurwa uye ine canaima 4.0 64-bit asi pandinotanga nependrive skrini rinodzima ndotanga hard disk, chii chandinoda rubatsiro
Pindura kuna Jose David Bracho
Ini ndinofunga pane kusawirirana pakati pemusoro wepositi nezviri mukati
Ngirozi Camacaro akadaro
Ini ndinogona kubhururuka kubva kumahwindo? Ini ndoda kuisa linux zvakare kune canaima iyo yakaiswa mumahwindo
Pindura kuna Angel Camacaro
NaBalena Etcher zvese zvinogoneka, kwandiri ndiyo chirongwa chakanakisa chekuisa Linux distro.
Ndakaona blog inotsanangura maitiro ekumisikidza zvakanaka, ndichaisiya pano kuitira kana paine mumwe munhu anokufarira. https://lareddelbit.ga/2020/01/04/como-instalar-cualquier-distribucion-linux-desde-un-usb/
Pandorga GNU / Linux: inonakidza yeBrazil distro yevana
EasyPeasy 1.6 RC inowanikwa: Ubuntu yebookbook rako